यौन दुर्व्यहारमा परेका राउटे युवतीलाई कस्तो होला सजाय ? यस्तो छ राउटेको कानुन र प्रचलन ? - StarPratika.com
यौन दुर्व्यहारमा परेका राउटे युवतीलाई कस्तो होला सजाय ? यस्तो छ राउटेको कानुन र प्रचलन ?
२ हप्ता अगाडि / ३५ पटक हेरिएको
काठमाडौ : केहि दिन अघि दुइ राउटे युवतीमाथी भएको यौन दुर्व्यहारको बारेमा सबैतिरबाट कडा भन्दा कडा कारबाहीको माग भइरहेको छ । उनीहरुको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै उनीहरुको न्याय माग भइरहेको छ । राउटे समुदायको कानुनमा ति युवतीहरुलाई मार्छन् भन्ने अनेक आँकलनहरु बाहिर आइरहेका छन् । खासमा के छ त तिनिहरुको वास्तविकतामा छ ।
राउटेसम्बन्धी जानकार पत्रकार भक्तबहादुर शाहीका अनुसार बजारमा चलेका सबै प्रकारका हल्ला अड्कलबाजीमा आधारित छन् । ‘यस्तो घटना विगतमा कहिल्यै भएको थिएन,’ उनले भने, ‘बजारमा हल्ला सुनेकै भरमा विभिन्न अड्कलबाजीका आधारमा समाचार प्रकाशमा आउनु न्यायसंगत होइन ।’
उनका अनुसार राउटेमा माफी तथा जरिवानाको संस्कार पनि छ । कसैले केही गल्ती गरेमा मुखियाको अगुवाईमा पञ्चायती अगुवाहरु बसेर दण्ड, जरिवानासम्बन्धी निर्णय लिने उनले बताए । यस अन्तर्गत जरिवाना तिराउने र माफी दिने प्रचलनसमेत रहेको उनले बताए ।
‘उनीहरु पनि चेतनशील छन् । अप्रिय निर्णय कहिल्यै गर्दैनन्,’ शाहीले भने, ‘पीडितको सुरक्षामा सरकार चनाखो हुनु सकारात्मक हो । तर, सञ्चार माध्यममा आएको जस्तो उनीहरुको आफ्नो कानुन छैन ।’
शाहीले राउटेको जस्तो भावना गैरराउटेसँग नभएको पनि बताए । यतिमात्र होइन, राउटे बस्तीमा महिला हिंसा नहुने उनले दाबी गरे । उनले भने, ‘यो समुदायमा महिलालाई उच्च दर्जाका रुपमा राखिन्छ । राउटेमा बालहिंसा, महिला हिंसा मान्य हुँदैन ।’
राउटेको आफ्नै परम्परा, रीतिरिवाज र संस्कृति छ । तर, अहिले परिर्वतनका नाममा विभिन्न गैरसरकारी संस्था राउटेलाई समाजको मूल धारमा ल्याउन अग्रसर नभएका पनि होइनन् ।
राउटेहरु आफ्नै परम्परा र प्रचलनमा रमाउन चाहन्छन् । राउटेको कानुन अलिखित छ । तर, उक्त कानुनलाई ‘कठोर’ भन्ने गरिएको छ । समुदायमा विवाह, मृत्यु सम्बन्धी पनि उनीहरुको आफ्नै परम्परा छ, जसलाई उनीहरु कानुनसरह मान्छन् ।